Tag: ọnụahịa | Martech Zone
Satọde, Satọdee 2, 2017 Satọde, Satọdee 2, 2017 Douglas Karr
Ndị ọrụ m nyere ndị ọrụ anyị ọrụ vidiyo ole na ole na-akọwa. Anyị enwetala ụfọdụ ihe ịtụnanya karịa afọ mgbe ị na-eji ha, mana ọnụahịa dịgasị iche iche nke ukwuu. Ọ bụ ezie na vidiyo na-akọwa ihe nwere ike ịdị ka ọ dị mma n'ihu, enwere ọtụtụ akụkụ na-agagharị iji wepụta vidiyo nkọwa na-arụ ọrụ nke ọma: Akwụkwọ edemede - edemede nke na - achọpụta nsogbu ahụ, na - enye azịza, ọdịiche dị iche, ma na - akpali onye na - ele ya ime ihe.
Otu n'ime ihe ndị m tụrụ anya na launching anyị n'ụlọnga 7 afọ ndị gara aga bụ na m chọpụtara na ndị gị n'ụlọnga ụlọ ọrụ wuru ihe na mmekọrịta karịa na ọ bụ uru nke ọrụ. Ọbụna m ga-agarịrị ịsị na ọ dabere na uru nke mmekọrịta ahụ. Onye ahịa gị ọ tụkwasịrị gị obi ma gị na ha na-arụ ọrụ ọtụtụ afọ? Ọfọn, nke ahụ ga - eduga na ndị na - ezo aka na mmekọrịta dị mma.
Triangle Development Weebụ
Wednesday, November 6, 2013 Wednesday, November 6, 2013 Douglas Karr
Ndị nkwekọrịta anyị niile na ndị ahịa anyị na-aga n'ihu kwa ọnwa. O siri ezigbo ike na anyị na-achụso ọrụ a kara aka na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị anaghị ekwe nkwa usoro iheomume. Nke ahụ nwere ike iyi ụfọdụ egwu mana okwu a bụ na ebumnuche ekwesịghị ịbụ ụbọchị ntọhapụ, ọ kwesịrị ịbụ nsonaazụ azụmaahịa. Ọrụ anyị bụ ị nweta nsonaazụ azụmaahịa ndị ahịa anyị, ọ bụghị ịme ụzọ mkpirisi iji wepụta ụbọchị mmalite. Dị ka Healthcare.gov na-amụta, nke ahụ bụ ụzọ
Wednesday, October 23, 2013 Wednesday, October 23, 2013 Douglas Karr
Ọ dị mma, ọ bụ oge maka ụda. Izu a a kụrụ m ihe ugboro ole na ole, ọ ga-abụrịrị na ụfọdụ n'ime ndị folks emeela ya ma ọ bụrụhaala na ha azụ ahịa. Achọrọ m ịnweta ihe ole na ole mgbe ị na-aga mkparịta ụka na ịzụta ọrụ n'aka gị ọzọ Agency. Ọnụahịa ahụ bụ Ihe You Na-akwụ, Ọ Bụghị Ihe Get Na-enweta Nke a bụ ọnụahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ
Ọnụahịa arụmọrụ weebụ
Fraịde, Jenụwarị 18, 2013 Wednesday, February 12, 2014 Douglas Karr
O siri ike mgbe nile ige onye na-ere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha ntị ịgwa gị na ị ga-azụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha iji nweta ego. Na ịntanetị, ọ bụ eziokwu naanị, n'agbanyeghị. Saịtị ngwangwa, ezigbo ngwa ọrụ, ezigbo imewe na ntakịrị ntụnye ndụmọdụ nwere ike ime ma ọ bụ mebie ụlọ ọrụ n'ịntanetị. Ihe arụ ọrụ arụmọrụ na-adịghị mma, ihe ọmụma SmartBear, na-egosipụta nsonaazụ ọjọọ nke oge na-adịghị mma ma dị egwu.
O doro anya na nyocha data nwere nloghachi na-enweghị atụ na ntinye ego… mana na-enweghị ngwaọrụ ndị dị mkpa, ihe na-efu oke ngwa ngwa. Anyị na-eme isiokwu na nyocha asọmpi maka otu n'ime ndị ahịa anyị ihe karịrị izu 3 ugbu a - ijikọta ụda data, ihe karịrị mkpụrụ okwu 100,000, ma jiri aka ya dozie ya. Nke ahụ dị oke ọnụ ma anyị na-achọ ngwa ọrụ BI na-esote iji nyere anyị aka belata oge na ụgwọ nke akụkọ ahụ. Site na infographic: